भिटेन पक्राउले जन्माएको प्रश्न – Khabar Silo
‘दिल धडकने दो’ रिलिजपछि उनले हिन्दी हिपहप कलाकारहरूलाई लगातार भेटिन्। लामो–लामो अन्तर्वार्ता गरिन्। ‘डिभाइन’, ‘नेजी’ जस्ता मुम्बईका झोपडपट्टीबाट उदाएका हिपहप कलाकारहरूको जीवनकथा र संघर्ष चाख दिएर सुनिन्।जोयाको यही चाख र भुट्भुटीको नतिजा हो– ‘गल्ली ब्वाई’।
यही क्रममा एमटिभी इन्डियाले पहिलोपटक ‘हसल’ भन्ने र्‍याप प्रतिस्पर्धा नै गरायो, जसको पहिलो सिजन हालै समाप्त भएको छ।यो भारतको मात्र कुरा होइन, नेपालमा पनि हिपहप वा र्‍याप गीत लोकप्रिय हुँदैछ। जमानामा नारायण गोपाल वा अरुण थापाका गीत सुनेर हुर्केको पुस्तालाई भलै यो विधाको संगीत हाहु लाग्ला, तर अहिलेको युवा पुस्ता र्‍याप गायकहरूलाई नै होनहार ठान्छ।
नेपालको सन्दर्भमा ‘भिटेन’ भनिने समीर घिसिङ त्यस्तै होनहार र्‍याप गायक हुन्।रौतहट, चन्द्रनिगाहपुरका यी गायकले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट प्रसारण गर्ने कतिपय गीत करोडभन्दा बढी हेरिएको रेकर्ड छ।
प्रहरीले यी दुईमध्ये कुनै एउटा अवस्थामा ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेर समात्न सक्छ। महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाका अनुसार भिटेनलाई पनि ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ थमाएर समातिएको हो।यसरी तात्तातै पक्रनलाई के उनी भागेर उम्कन खोज्दै थिए? कि प्रमाण नष्ट गर्न खोज्दै थिए?
यो भिटेन पक्राउ प्रकरणमा प्रहरीबाट भएको पहिलो गल्ती हो।अर्को कुरा, भिटेनले अश्लील भनिएको गीत पक्राउ पर्नेबित्तिकै युट्युबाट हटाइसकेका छन्। अरू गीतमा अनुसन्धान गर्ने भए ती सबै युट्युबमै उपलब्ध छन्। प्रहरी युनिफर्म लगाएर गाँजा मोल्दै गरेको तस्बिरका कारण पक्राउ गरिएको हो भने त्यो उनको म्युजिक भिडिओमा प्रयोग भएको छैन। उनले छुट्टै तस्बिर अपलोड गरेका हुन्, जुन सार्वजनिक छ।
यो प्रहरीबाट भएको दोस्रो गल्ती हो।भिटेनले आफ्ना गीतमा ‘अश्लील’ भनिने शब्दहरू प्रयोग गर्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने पनि बहसमा छ। यसका लागि सबभन्दा पहिला हिपहप वा र्‍याप गीत के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।
सडकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु राज्यको काम हो, तर घरभित्र छिरेर कसले के गर्न हुन्छ र कसले के गर्न हुन्न भनेर नैतिकताको पाठ पढाउनु राज्यको काम होइन।राज्य नागरिकको नैतिक निगरानीमा ओर्लियो भने समाज अगाडि बढ्दैन, पछाडि धकेलिन्छ।
हामीले कस्तो समाज खोजेको हो- अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको खुला समाज, कि राज्यले नागरिकको नैतिकतामाथि पनि निगरानी राख्ने बन्द समाज?भिटेन पक्राउपछि हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने प्रश्न यही हो।
एजेन्सी । फिल्ममा कमेडियनको भुमिकाले धेरै अर्थ राख्छ । यही कारणले हरेक फिल्ममा कोही न कोही कमेडियन भएकै हुन्छन् । बलिउडमा जस्तै साउथ फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि केही कमेडियन धेरै नै लोकप्रिय छन् । यीमध्ये ब्रम्हानन्दम सबैभन्दा चिनिएको अनुहार हो । अहिलेसम्म उनले १ हजार भन्दा बढि फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् । उनले प्रतिदिन ३ लाख […]
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’ को ट्रेलर हालसालै रिलीज भएको छ। फिल्ममा प्रियंकासँग फरहान अख्तर र जायरा वसीम पनि देखिएका छन् । यस फिल्मको ट्रेलरलाई दर्शकले धेरै मन पराएका छन् । एक अन्तर्वार्ताको क्रममा प्रियंकाले निक उनलाई देखेर रोइरहेको पनि बताइन्। टोरोन्टो अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिवलको अवसरमा, प्रियंकाले पीपुल्स डटकमलाई […]